Tsipahin’ny olona ny fanalana ny sefo fokontany | NewsMada
Tsipahin’ny olona ny fanalana ny sefo fokontany
Miseho ny disadisa. Ahina ny korontana ara-piarahamonina vokatry ny fanesoran’ny mpitondra ao anivon’ny kaominina Mahitsy ny sefom-pokontany sy lefiny maromaro tamin’ny fomba tsy nazava tamin’ny fokonolona. Mitsangana, milaza ny hitsipaka io fanapahan-kevitra io hatramin’ny farany ny ao amin’ny fokontany Ankazo ary hampakatra ny raharaha raha tsy mahazo fanazavana mahafa-po.
Mangataka fihaonana amin’ny manampahefana ambony aty an-dRenivohitra ny sefom-pokonolona avy amin’ireo vohitra folo mandrafitra ny fokontany Ankazo, amin’izao fotoana izao. “Hangata-panazavana momba ny didy navoakan’ny lehiben’ny distrika ho fanalana ny sefom-pokontany Ratolojanahary Victor , amin’ny toerany izahay”, hoy ny fokonolona. Tsy navelan’izy ireo ho tanterahina mihitsy ny famindram-pahefana na vonona amin’izany aza ireo hifandimby toerana mandra-pisian’ny fanazavana io didy heverin’izy ireo hisy ambadika io…
Efa nangata-panazavana tany amin’ny ben’ny Tanàna sy ny delege ary ny lehiben’ny distrika ihany izy ireo fa tsy nohenoin-teny mihitsy, araka ny fitarainany. “Tsy maintsy miakatra ambonimbony kokoa, hitady ny marina izahay. Zary lasa fitondram-pianakaviana ny eto Ankazo vokatr’io didy io satria mpianadahy ny sefom-pokontany vao notendrena sy ny lefiny ary ny talen’ny EPP, efa nitady ny fomba rehetra hanalana io sefom-pokontany io tamin’ny toerany, hatramin’izay”, hoy ihany izy ireo.